UPDATE : Wax Ka Ogow Filimada Miiska U Saaran Salman Khan iyo Kan Ugu Horeeya Duubis Ku Bilaabi Doono Dabangg 3, Kick 2 Ama Bharat
Kadib jabkii ka raacay Tubelight Mega Star Salman Khan wuxuu haatan ku mashquulsan yahay dhameestirka duubista filimka Tiger Zinda Hai oo lagu kalsoon yahay bisha September inuu soo gaba gabeyn doono.
Salman Khan ilaa haatan si rasmi ah uma shaacinin Tiger Zinda Hai kadib filimka xiga ee uu duubis ku bilaabi doono kaasi oo la daawan doono Eid 2018.
Waxaa siweyn looga doodaa filimada Dabangg 3, Kick 2 Ama Bharat midkood inuu ka hawl gali doono waana sedex filim oo fariin ahaan kala duwan waloow Dabangg 3 iyo Kick 2 ay yihiin filimo Masala ah ama mada daalo dhameestiran leh.
Laakiin qof aad ugu dhow Salman Khan oo Times of India la hadlay kana mid ah qoyska Khan Khandan wuxuu sheegay in Salman sedexdaan mashruuc uu ka hormarin doono filimka Dancing Dad.
Waxaa la sheegay in Dancing Dad uu Salman Khan ku jilaayo aabo gabbar 13-jir ah dhalay sidoo kalena xirfada Dance-ga uu baranaayo waxaana la jileyso Jacqueline Fernandez.
Sidaa darteed Dancing Dad ayaa noqon doono filimka Eid 2018 la daawan doono laakiin Salman halkaas filim lama imaan doono sanadka xiga wuxuu doonayaa filimada Dabangg 3, Kick 2 Ama Bharat midkood inuu ku labeesto.
Filimka Bharat waxaa iska leh Salman seedigiis Atul Agnihotri waana filim qiiro badan halka Dabangg 3 uu Arbaaz Khan iska leeyahay sidoo kalena Kick 2 Sajid Nadiadwala ayaa iska leh.